Ciidamada Kenya oo howlgal ballaaran ka wada Mandera.
Monday January 09, 2017 - 10:03:55 in Wararka
Ciidanka dowladda Kenya ayaa saaka howlgal ka wadda deegaano hoos yimaada Degmada Mandera ee dalka Kenya , kadib markii ay soo baxday cabsi ku aadan in dagaalyahano ka tirsan Shabaab ay ku sugan yihiin Degmada Mandera ee dalka Kenya.
Taliyaha qeybta Booliska degmada Mandera ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka lagu baadi goobaayo dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo inta badan weerar dhaba gal ah u geystay ciidanka dowladda Kenya ee ku sugan xuduudka u dhaxeeya Kenya iyo Somaliya.
Waxa uu sheegay in ay jiraan dad badan oo lagu tuhmaayo in ay Shabaab xiriir la leeyihiin oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka dowladda Kenya.
Taliyaha ciidanka Mandera ayaa sheegay in ay laba jibaari doonaan howlgalada ay ka wadaan degmada Mandera iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada .
Saraakiisha dhanka amniga dalka Kenya ayaa sheegay in ay jiraan weeraro ku soo wajahan dalka Kenya, sidaas darteedna dowladda looga baahan yahay in ay laba jibaarto xaqiijinta amniga.
Dowladda Kenya ayaa sidoo kale lagu soo waramaya in ay si wey u adkeeysay ammaanka degmada Lamu iyo sidoo kale magaalo xeebeedka Mombasa.